RW Kheyre balan qaad muhiim ah ka sameeyey munaasabadii ciidamada Asluubta – Hornafrik Media Network
Waxa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay xuska sanad guuradii 50aad ee ka soo wareegatay maalintii la asaasay ciidamada Asluubta Soomaaliyeed.
Munaasabadda xuska oo ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta ciidamada Asluubta Soomaaliyeed ee ku taalla Ex-Control Afgooye, ayaa waxaa ka soo qayb galay Ra’iisul wasaaraha dalka, wasiirro, xildhinaanno iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo munaasabadda khudbad ka jeediyay ayaa ugu horreyn waxa uu u hambalyeeyay qaybaha kala duwan ee ciidamada Asluubta Soomaaliyeed iyo dhammaan xubnihii kasoo qayb qaatay jiritaanka ciidamada Asluubta Soomaaliyeed.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa waxa uu khudbaddiisa kusoo hadal qaaday arrimaha cadaaladda dalka, isaga oo sheegay in xukuumaddiisu ay dib u habayn ku samayn doonto, si lamid ah dib u habayntii ay dowladdu ku sameysay ciidamada militeriga Soomaaliya.
Maanta oo kale 22-kii Febraayo 1970-kii ayay ahayd markii la aas-aasay ciidamada Asluubta Soomaaliyeed, waxaana sanad walba la dhigaa munaasabad lagu xusayo.
Hoos ka Daawo khudbaddi Kheyre